Dehumidifier နှင့်အပူပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်အတူ TSIX အဆက်မပြတ်ငရုတ်သီး Conveyour ခါးပတ်ခြောက်စက် | Twesix
Twesix အစားအစာပေါ်ကိုခါးပတ်လေမှုတ်စက် mesh သာခန်းခြောက်နိုင်သည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပူစုပ်စက်လေမှုတ်စက်မှချိတ်ဆက်, ဒါပေမယ့်လည်းအပူ dehumidify နှင့်ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါတယ်။ dehumdifying funtion ပိုင်ဆိုင်ပါကခြောက်အစားအစာများ၏အရည်အသွေးအာမခံချက်ပေးနိုင်သည်။ အပူပြန်လည်နာလန်ထူလွန်းစွမ်းအင် consumptio ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ exeperience သကဲ့သို့, ဒီဇိုင်း tradtional ပေါ်ကိုခါးပတ်လေမှုတ်စက်ထက် 60-70% စွမ်းအင်ကိုကယ်တင်နိုင်ပါ။ အဆိုပါစစ်ဆင်ရေးလွယ်ကူသည်။ တစ်ဦးတည်းသာ PLC controller ကိုအသုံးပြုပုံကမြေတပြင်လုံးခြောက်သွေ့ပစ္စည်းကိရိယာများကို run နိုင်ပါတယ်။ နည်းလမ်းကအစားအသောက်စက်ရုံတွေများအတွက်အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ပါ။
အဆိုပါ coveyor ခါးပတ်အစားအစာလေမှုတ်စက် multifuntional ဖြစ်ပါတယ်။ တူညီတဲ့လေမှုတ်စက်သုံးခြင်းအားဖြင့်သူကအဆိုပါ client ကိုသာ PLC အော်ပရေတာအတွက်ခြောက်သွေ့ data တွေကိုပြောင်းလဲပစ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စသည်တို့ကိုအသီး, ဟင်းသီးဟင်းရွက်, ပင်လယ်စာ, အသား, ပန်းပွင့်, အခြောက်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါပေါ်ကိုခါးပတ်လေမှုတ်စက်လုံခြုံသည်။ အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူတစ်စုံတစ်ခုမှားယွင်းနေလည်းမရှိပြီးတာနဲ့စက်အဆိုပါနှိုးဆော်သံမြှင့်သို့မဟုတ်အလိုအလျှောက်အလုပ်လုပ်နေရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် PLC အော်ပရေတာစစ်ဆေးနေအသုံးပြုပုံအကြောင်းပြချက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ဟိုတယ်, Home ဘား / စားသောက်ဆိုင်
anti-ရေ, anti-Scratch, anti-Dirty, အမြင့်အဆုံး
ပုံမှန်အသုံးပြုမှုအတွက် 5-8 တစ်နှစ်တာ
ဒါဟာ Is ဘယ် Linux ကိုဒါမှမဟုတ် Windows ကို
ရုပ်မြင်သံကြားငယ်စဉ်အခါကက Superman ရဲ့နေဆဲလူကြိုက်များစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်ကောင်အပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးအကျယ်လူကြိုက်များပြပွဲတခုရှိ၏။ ကြောင်းပြသ၏အဖွင့်သှားသောတစ်ဦးရင်းနှီးကျွမ်းထားသောစာပိုဒ်တိုများ "မျှော်ခဲ့ရတယ်။ မိုဃ်းကောင်းကင်၌ Up ကို။ ဒါဟာငှက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာက Superman ရဲ့! " ဘယ်လိုချစ်ရာသခင်သည်က Superman ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု၌ဖြစ်လာသည်နှင့်နတ်မင်းကြီးဂြိုဟ်သားများနှင့်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းညှို့သာများစွာသောလူနက္ခတ္တဗေဒကြောင့်ဖုန်းဆက်ဖို့မသိရလျှင်ပင်, သဘောသဘာဝနှင့်နက္ခတ္တဗေဒအကြောင်းကိုလူသားအားလုံးအတွက်နက်ရှိုင်းသောသိချင်စိတ်ရှိကွောငျးအလေးပေးဖော်ပြသည်။
သင့် client ဘယ်မှာမှ
အာရှ, ဥရောပ, အာဖရိက, တောင်အမေရိက, နယူး Zeland, Austrilia စသည်တို့ကို
အဆိုပါ MOQ 1 ယူနစ်ဖြစ်ပါတယ်
答: Tsix အစားအစာခြောက်သွေ့စက်တွေအမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီတင်းကြပ်စွာထုတ်လုပ်သော, ကြှနျုပျတို့တင်ပို့ခြင်းမပြုမီစက်စမ်းသပ်ရန်နေကြသည်။ ကျနော်တို့အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်နှင့်စမ်းသပ်အစီရင်ခံစာများအမျိုးမျိုးတို့ကိုတယ်ပါပြီ
Tsix အစားအစာခြောက်သွေ့စက်တွေစက်ရုံ Foshan, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်တွင်တည်ရှိသည်။
ဖောက်သည်များအတွက်ကုန်ပစ္စည်းများသည်စျေးကွက်အတွက်သင့်လျော်ခြင်းရှိမရှိကိုစစ်ဆေးရန်ဖောက်သည်အတွက်0ယ်ယူရန်အမိန့် / စမ်းသပ်မှုအမိန့်ကိုလက်ခံပါသည်။
4. ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာမီသင့်ထံမှကြားနာရန်နှင့်သင်၏လေးစားမှုရှိသောကုမ္ပဏီနှင့်စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုစတင်ရန်0မ်းသာပါသည်။